Wada deganaansho - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Wada deganaansho
Wada deganaanshadu waa xiriir dhexmara lammaane, kaasoo ay meel iskula deganyihiin laakiin aysan is-qabin. Dalka Finland bilaabida xiriirka wada degida, xeerarka wada degida iyo joojinta xiriirka wada degida waa arin labada qof ee wada degen ka dhexaysa. Wada degida meelna lagama diiwaan geliyo.
Si ka duwan guurka,
labada wada degen midna midka kale xil kama saarna mas’uuliyada masruuf-siinta
Labada wada degan isma dhaxlayaan
Haddii uu mid ka mid ah geeriyoodo, kan kale ma qaadanayo lacagta hawlgabka ee kan geeriyooday
Waad qaadan kartaa magac qoys oo wadajir ah, haddii
aad leedihiin carruurta aad wada leedihiin ama
aad wada nooleydeen ugu yaraan shan sanadood.
Haddii aad dooneysaan magac qoys oo wadajir ah, u dira codsiga beddelista magaca Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Haddii aad si joogto ah wadajir u deggan tihiin hal guri waxaad tihiin iskudheri. Arrintan waxey macno leedahay haddii aad tusaale ahaan Kelada ka codsaneysaan kaalmada ijaarka.
Wixii warar dheeraad ah oo ku saabsan lacagta kaalmada degaanka ee dadka isla degan laakin aan is-qabin ka akhriso bogga internetka InfoFinlandi ee: Kaalmada ijaarka.
Beddelista magaca qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Xiriirka wada deganaanshada lamaanaha ee dalka dibadiisa lagu soo galay
Xiriirka wada degenaanshadu qodob la cuskado u noqon karaa helitaanka sharciga degenaanshada dalka. Shaqaalaha xafiiska dawlada ayaa go’aan ka gaaraya bixinta sharciga degenaanshada ayagoo arin walba goonidiisa u fiirinaya.
Aqoonsiga aabonimada (Isyyden tunnustaminen)
Haddii ad wada nooshihiin idinka oo an isqabin oo ilmo idiin dhasho, waa in la aqoonsadaa aabonimada. Haddii aabonimada la aqoonsan waayo ilmahaasi sida sharcigu dhigayo wuxuu ahaanayaa aabo la’aan waxana mas’uul ka ahaanaysa daryeelkiisa iyo masruufkiisa hooyadii, xataa haddii ad wada dagantihiin. Aabonimada wakhtiga uurka ayaa la aqoonsan karaa waxana lagu fulin karaa howshaas xarunta hooyooyinka iyo dhallaanka (äitiysneuvola). Markuu ilmuhu dhasho aabuhu wuxuu ku aqoonsan karaa ilmihiisa isaga oo u tagaya shaqaalaha ku qoran kormeerka caruurta (lastenvalvoja) ee degmada. Aqoonsiga aabonimada waxa xaqiijinaya Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Markii aabenimada la xaqiiyo
Ilmaha waxaa la siin karaa magaca qoyska ee aabaha
abuhu wuxuu noqonayaa daryeelaha ilmaha keligiis ama asaga iyo hooyada si wadajir ah. Daryeelahu (huoltaja) waa qofka ilmaha mas’uul ka ah daryeelka ilmaha iyo bar-baarintiisa.
aabaha waxaa saaran mas’uuliyada masruufka ilmaha
ilmuhu waxay xaq u leeyihiin dhaxalka aabahood iyo weliba dhaxalka qaraabada aabaha iyo bil caksi
Ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay lacagta hawlgabka qoyska, haddii uu aabuhu geeriyoodo.
Haddii aabuhu uu diido aabenimada, hooyadu dacwad ayey ku soo googi kartaa, si loo xaqiijiyo aabenimada.
Finland waxaa ka shaqeynaya sharciga hooyonimada, kaas oo dhigaya in cunuggu uu labo hooyo yeelan karo. Haweenayda cunugga dhashay waa markasta hooyada cunugga. Cunuggu waxaa loo aqoonsan karaa hooyo kale, haddii:
uu cunuggu daaweynta bacriminta uurka ugu dhasho hooyada iyo lamaanaheeda dumarka ah ama lamaanaha ay isqabaan
labada waalid oggolaadeen daaweynta bacriminta uurka iyo
haddii la aqoonsan waayo aabe cunugga dhalay.
Hooyonimada waa in aqoonsadaa islamarkaasna la xaqiijiyaa xittaa, marka ay waalidku isqabaan.
Marka hooyonimada la xaqiijiyo,
cunugga waxaa la siin karaa magaca qoyska ee labada hooyo midkood ama magac qoys oo isku xiran
labada hooyo waa in ay masruufka cunugga ka qaybqaataan
hooyooyinku waxay wadajir ama kali ahaan u noqon karaan mas’uulka rasmiga ah ee cunugga
cunuggu wuxuu xaqa labada hooyo iyo qoysaskooda ku leeyahay xuquuqda dhaxlidda.
Xarunta hooyada iyo dhallaanka ayaa horay hooyinimada looga xaqiijin karaa inta uu ilmuhu uurka ku jiro ama markii uu ilmuhu dhasho ka dib oo la booqanayo dano-ilaaliyaha carruurta ee degmadaada. Aqoonsiga hooyonimada waxaa xaqiijinaaya Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Aqoonsashada iyo xoojinya aabanimada iyo hooyanimadaFinnish | Iswidish
Magaca qoyska cunugga ee wada deganaanshaha
Marka uu cunug ku dhasho wada deganaansho, wuxuu heli karaa
magaca qoyska ee hooyadiis ama
magaca qoyska ee aabihiis haddii aabonimada la xaqiijiyay ama
magaca qoyska ee hooyada aan dhalin, haddii hooyonimada la xaqiijiyay ama
magaca qoyska ee waalidka ka dhexeeya ama
magaca qoyska ee isku xiran, kaas oo ka kooban magacyada qoyska ee waalidka.
Haddii aysan waalidku laheyn magac qoys oo ka dhexeeya, laakiin ay leeyihiin carruur ka dhexeysa, cunuggu wuxuu qaadanayaa magac qoys la mid ah midka walaalaha.
Magac qoyska mideysan waad la codsan kartaa lammaanahaada aad wada degan tihiin haddii
aad isla deganeedeen ugu yaraan shan sano ama
aad wada dhasheen cunug.